Home » Archives by category » Authors » Taammanaa Bitimaa
Taammanaa Bitimaa:- Barri Kun Bara Oromoo Fi Oromiyaan Milkaawan Haa Tahu
Taammanaa Bitimaa irraa* Yaa ddubbiftoota barruu tanaa, mee hunda keessaniif barri amma itti-seenne kun, bara nagaa fi bara badhaadhinaa haa tahu! Akkuman ani jedhe kana mee WAAQNIS haa jedhu! Barruu…
Taammanaa Bitimaa:- OROMIYAAN SEERA WARAANAA JALA JIRTI
Taammanaa Bitimaa irraa* Kunoo, erga mootummaan warra Wayyaanee “labsii seera waraanaa” baasee, biyyi abbootii Gadaa fi haadhotii Siiqqee kottee gita-bittee Tigraay hakoosshaa fi shookkisaa san jalatti argama. Uummanni Oromoo guddichii…
Taammanaa Bitimaa:- Waaqatti Himaddhu!
Taammanaa Bitimaa irraa* Yaa Irreecha olka’ii dubbaddhu Bishooftuu olka’ii dubbaddhu Yaa Oromoo olka’ii dhubbaddhu Oromiyaa oka’ii dubbaddhu Waan barana taate Waan yeeyyiin si goote Addunyaatti iyyaddhu Waaqatti himaddhu! Isatoo hunda beekaa…
Taammanaa Bitimaa:- Ammaan Booda Jiraa Oromoo Dhiisitii Du’aan Oromoollee Harqoota Gabrummaa Hin Baatu
Taammanaa Bitimaa irraa* Kunoo, amma bara moofaa keessaa gara bara haaraatti dabarree jirra. Barri dabre kun, barri 2015 bara Oromooti jechuu dandeenya. Kan bara san bara Oromoo taasese immoo Qabsoo…
Taammanaa Bitimaa:- OFIRRAA KAASI MALEE*
Taammanaa Bitimaa irraa** Ginni bittaa-Maqalee Jarri qawween as galee Akkuma Minilik-faa Uummata keenya qalee Ijoollee teenya qalee Yaa Oromoo waltayii Gaaraa-dakaa gadbayii Ofirraa kaasi malee! Biyya keenya qabatee Dilbii keenya…
Taammanaa Bitimaa:- QABSOON ITTI-FUFA (Walaloo)
Taammanaa Bitimaa irraa* Qabsoon itti-fufa Cimsee itti-fufa Alaa-manaa itti-fufa Gaaraa-dakaa itti-fufa Gabroomfataan burkutaayee kufa Bilisummaan dhiiga keenyaan dhufa! Sululawwanii fi laggeen mara labee Bosonotaa fi gaarran cufa dhaqqabee Uummata hunda…
October 23, 20153 CommentsRead More
Taammanaa Bitimaa:- Mandaroota fi Magaalaawwan Oromiyaa ("Oromian Towns and Cities") – Kutaa Saglaffaa
Taammanaa Bitimaa irraa*** DURADUBBII Dubbiftoota barreeffa kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, baga nagaa fi nageenyaan naaf turtanii kutaa saddeettaffaa kana duukaa-buu’uuf dhuftani! Akkuma isin amma gara mandhee tanaa dhuftan mee nagaa…
Taammanaa Bitimaa:- Mandaroota fi Magaalaawwan Oromiyaa ("Oromian Towns and Cities") – Kutaa Saddeettaffaa
Taammanaa Bitimaa:- Mandaroota fi Magaalaawwan Oromiyaa ("Oromian Towns and Cities") – Kutaa Torbaffaa
Taammanaa Bitimaa irraa* DURADUBBII Dubbiftoota barreeffa kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, baga nagaa fi nageenyaan naaf turtanii kutaa torbaffaa kana duukaa-buu’uuf dhuftani! Akkuma isin amma gara mandhee tanaa dhuftan mee nagaa…
Taammanaa Bitimaa:- Mandaroota fi Magaalaawwan Oromiyaa ("Oromian Towns and Cities") – Kutaa Jahaffaa
Taammanaa Bitimaa irraa* DURADUBBII Dubbiftoota barreeffa kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, baga nagaa fi nageenyaan naaf turtanii kutaa shanaffaa kana duukaa-buu’uuf dhuftani! Akkuma isin amma gara mandhee tanaa dhuftan mee nagaa…